Fumanisa zonke izinto ezibalulekileyo ukuze uzibone eVienna | IBezzia
Yintoni ongayibona kwisixeko saseVienna
Susana Garcia | 26/05/2021 10:00 | yokuPhila, Uhambo
IVienna sisixeko esihle kakhulu, ngomtsalane nangobunkunkqele obuchukumisa zonke iindwendwe ezidlula kuwo. Idolophu enkulu yase-Austria iyasivuyisa ngezakhiwo zayo zembali, iikona zayo kunye neefestile zayo. Ukuba uyazithanda zonke iidolophu zaseYurophu, ngokuqinisekileyo le ayizukukushiya ungakhathali, kuba inalo elo chaphaza lidala lixubileyo kunye nomnwe wobugcisa ophefumlelweyo kuzo zonke iinooks nakwiikona.
La Isixeko saseVienna yindawo ekufanele ukuba uyityelele. Siza kubona ukuba zeziphi ezona ndawo ziphambili sinomdla kuzo, kodwa njengakuso nasiphi na esinye isixeko kuya kufuneka uzivumele utyelele yonke ikona ukuba kunokwenzeka, kuba sinokuhlala sifumana iindawo ezimangalisayo. Vumela ukuba uqhutywe ngumtsalane omkhulu waseVienna kuhambo lwakho olulandelayo.
1 Ibhotwe laseSchönbrunn
2 Ibhotwe laseHofburg
3 ILayibrari yeSizwe yaseAustria
Este Ibhotwe laziwa njengeVersailles yaseVienna, kwaye ayisiyonto incinci ngenkangeleko yayo entle. Eli bhotwe lakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX kwisiza sendawo yokuzingela. Ekuhambeni kwexesha iyakuba yindawo yeholide yosapho lwasebukhosini de kube sekupheleni kobukumkani ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX. Indawo eyayikwayindawo apho uKumkanikazi odumileyo uSissi wayekhona. Ukhenketho olukhokelwayo kwibhotwe linokubhukishwa ukuze ungaphoswa nanye into kumagumbi akho, ukonwabele ezi gadi zilungisiweyo, kwaye ufumane itikiti lokubona iMyuziyam yoThutho lwe-Imperial ecaleni kwebhotwe.
Ifunyanwa embindini wedolophu sifumana elinye ibhotwe ekufuneka lityelelwe, iHofburg Palace. Kwakuyiminyaka engaphezu kweenkulungwane ezintandathu Indawo yokuhlala yentsapho yasebukhosini yaseHabsburgs. Ngaphakathi ebhotwe ungandwendwela izindlu ezindala zasebukhosini, iimyuziyam kunye neenkonzo. Imyuziyam yaseSisi, enikezelwe kubomi benkosikazi eyaziwayo okanye isilivere yenkundla, ibetha ngokukodwa.
ILayibrari yeSizwe yaseAustria
Yakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX Kunokuthiwa yenye yezona ndawo zintle zamathala eencwadi ehlabathini, ke ukuba uyaluthanda olu hlobo lwesithuba akufuneki uluphose. Kwithala leencwadi sinokubona uyilo lwesimbo se-baroque, imifanekiso eqingqiweyo yakudala, imizobo kunye nokuqokelelwa kweencwadi.
IVienna State Opera yeyona nkampani ye-opera idumileyo kwihlabathi. Indlu yeVienna Opera yavulwa ngo-1869 njenge Isakhiwo sobuNkcubeko, esinomsebenzi kaMozart. Ngo-1945 ibhombu yasonakalisa kakhulu esi sakhiwo kwaye kwathatha iminyaka ukusivula kwakhona. Namhlanje sisesephambi kwesimboli esinyanisekileyo yesixeko, isakhiwo sembali esibaluleke kakhulu. Ungasibona isakhiwo ngaphakathi kwaye uthathe ukhenketho olukhokelwayo. Ukongeza, kunokwenzeka ukuba uthenge amatikiti aphantsi emisebenzini, lilithuba elihle.
Nguwo Eyona ntengiso yaziwayo kuyo yonke iVienna Kwaye yaqhutywa ukusukela kwinkulungwane ye-XNUMX. Yimakethi eqhelekileyo apho unokufumana zonke iintlobo zeendawo zokutya. Indawo efanelekileyo yokubona ubomi bemihla ngemihla yabantu baseVienna kunye nokuthenga ukutya kwasekhaya. Ukongeza, kukho iindawo zokutya kunye neevenkile kunye neevenkile, ezenza indawo efanelekileyo yokumisa kwaye uzame izitya eziqhelekileyo.
El Ipaki yesixeko, eyavulwa ngenkulungwane ye-XNUMX, yenye yeendawo zokuya eVienna. Ipaki inendlela yesiNgesi, enesikhumbuzo kuJohan Strauss okanye kwisakhiwo saseKursalon. Kule paki emalunga ne-65.000 yeemitha zesikwere siza kubona zonke iintlobo zezithuba eziluhlaza kunye nezityalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Yintoni ongayibona kwisixeko saseVienna
Izinwele ezonakalisiweyo? Yibuyise ngezi ngcebiso
Ukulala neqabane kuyanceda kwimpilo yengqondo